यशैया, इजकिएल, मोशा, दाऊद, अब्राहाम, र दानिएल इस्राएलका चुनिएका मानिसहरूका बीचमा अगुवाहरू वा अगमवक्ताहरू थिए। किन तिनीहरूलाई परमेश्‍वर कहलाइएन? किन पवित्र आत्‍माले तिनीहरूको लागि गवाही दिनुभएन? येशूले काम थालनी गर्ने र आफ्‍ना वचनहरू सुरु गर्ने बित्तिकै किन पवित्र आत्‍माले उहाँको गवाही दिनुभयो? अनि किन पवित्र आत्‍माले अरूको लागि गवाही दिनुभएन? तिनीहरू, अर्थात् देहका मानिसहरू, सबै “प्रभु” कहलाइए। तिनीहरूलाई जे कहलाइए पनि, तिनीहरूका कार्यले तिनीहरूको अस्तित्व र सारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, र तिनीहरूको अस्तित्व र सारले तिनीहरूको पहिचानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। तिनीहरूका सार तिनीहरूका पदहरूसँग सम्‍बन्धित छैन; तिनीहरूले जे व्यक्त गरे, र तिनीहरूले जे जिए त्यसले यसैको प्रतिनिधित्व गर्छ। पुरानो करारमा, प्रभु भनेर कहलाइनु कुनै असाधारण कुरा थिएन, अनि व्यक्तिलाई जेसुकै भनेर बोलाउन सकिन्थ्यो, तर उसको सार र अन्तर्निहित पहिचान अपरिवर्तनीय हुन्थे। झूटा ख्रीष्टहरू, झूटा अगमवक्ताहरू, र धोकेबाजहरूका बीचमा, “परमेश्‍वर” कहलाइनेहरू पनि छैनन् र? अनि किन तिनीहरू परमेश्‍वर होइनन्? किनभने तिनीहरूले परमेश्‍वरको कार्य गर्न सक्दैनन्। मूल रूपमा, तिनीहरू मानव हुन्, मानिसहरूलाई धोका दिनेहरू हुन्, परमेश्‍वर होइनन्, त्यसकारण तिनीहरूमा परमेश्‍वरको पहिचान छैन। के दाऊद बाह्र कुलका बीचमा प्रभु भनेर कहलिदैन थियो र? येशूलाई पनि प्रभु कहलाइयो; किन येशूलाई मात्रै देहधारी परमेश्‍वर कहलाइयो? के यर्मियालाई पनि मानिसको पुत्र भनेर चिनिँदैन थियो र? अनि के येशू मानिसको पुत्रको रूपमा चिनिनुहुन्‍न थियो र? किन येशू परमेश्‍वरको खातिर क्रूसमा टाँगिनुभयो? के उहाँको सार फरक भएकोले होइन र? के उहाँले गर्नुभएको काम फरक भएकोले होइन र? के शीर्षकले अर्थ राख्छ र? येशूलाई मानिसको पुत्र कहलाइए तापनि, उहाँ परमेश्‍वरको पहिलो देहधारण हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शक्ति धारण गर्न, र छुटकाराको काम पूरा गर्न आउनुभएको थियो। यसले येशूको पहिचान र सार मानिसको पुत्र भनेर कहलाइने अरूका भन्दा फरक थिए भन्‍ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ। आज, तिमीहरूका बीचमा कसले पवित्र आत्माले प्रयोग गर्नुभएकाहरूले बोलेका सबै वचनहरू पवित्र आत्माबाट नै आएका थिए भनेर भन्‍ने आँट गर्छ? के कसैले त्यस्ता कुराहरू भन्‍ने आँट गर्छ? यदि तैँले त्यस्ता कुराहरू भन्‍ने आँट गर्छस् भने, एज्राको अगमवाणीको पुस्तकलाई किन खारेज गरियो, र प्राचीन सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई पनि किन त्यसै गरियो? यदि ती सबै पवित्र आत्माबाट नै आएका थिए भने, तिमीहरूले किन त्यस्तो स्वेच्‍छाचारी छनौटहरू गर्ने आँट गर्छौ? के तँ पवित्र आत्‍माको कार्यलाई छनौट गर्न योग्य छस्? इस्राएलका धेरै कथाहरूलाई पनि खारेज गरियो। अनि यदि तँ विगतका यी लेखहरू पवित्र आत्‍माबाट आएका हुन् भन्‍ने विश्‍वास गर्छस् भने, किन कतिपय पुस्तकहरूलाई खारेज गरियो? यदि ती सबै पवित्र आत्‍माबाट नै आएका थिए भने, तिनीहरू सबैलाई सुरक्षित राखिनुपर्थ्यो, र पढ्नको लागि मण्डलीहरूका दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूकहाँ पठाइनु पर्नेथियो। तिनीहरूलाई मानिसको इच्‍छाद्वारा चुनिनु वा हटाउनु हुँदैनथियो; त्यसो गर्नु गलत हो। पावल र यूहन्‍नाका अनुभवहरू तिनीहरूका व्यक्तिगत अन्तर्दृष्टिहरूसँग मिसिएका थिए भन्दैमा तिनीहरूका अनुभवहरू र ज्ञान शैतानबाट आएको थियो भन्‍ने हुँदैन, तर तिनीहरूसँग तिनीहरूका व्यक्तिगत अनुभवहरू र अन्तर्दृष्टिहरूबाट आएका कुराहरू थिए भन्‍ने मात्रै यसको अर्थ हुन्छ। तिनीहरूका ज्ञान त्यस बेलाको तिनीहरूको खास अनुभवहरूको पृष्ठभूमि अनुरूप थियो, र यो सबै पवित्र आत्माबाट नै आएको थियो भनेर कसले निर्धक्‍कसाथ भन्‍न सक्छ? सुसमाचारका चार वटै पुस्तकहरू पवित्र आत्‍माबाट आएका थिए भने, किन मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्‍नाले येशूको कामको बारेमा केही फरक-फरक कुरा भने? यदि तिमीहरू यो कुरामा विश्‍वास गर्दैनौ भने, पत्रुसले प्रभुलाई कसरी तीन पटक इन्कार गरे त्यसको बारेमा बाइबलमा दिइएको विवरणलाई हेर: तिनीहरू सबै फरक छन्, र ती प्रत्येकमा आ-आफ्‍नै विशेषताहरू छन्। अज्ञानी धेरैहरूले यसो भन्छन्, “देहधारी परमेश्‍वर पनि मानिस नै हुनुहुन्छ भने, के उहाँले बोल्‍नुहुने वचनहरू पूर्ण रूपमा पवित्र आत्‍माबाट नै आउन सक्छन्? यदि पावल र यूहन्‍नाका वचनहरू मानव इच्‍छाद्वारा मिश्रित थिए भने, के उहाँले बोल्‍नुहुने वचनहरूमा मानव इच्‍छा वास्तवमै मिश्रित छैनन् र?” यस्ता कुराहरू भन्‍ने मानिसहरू अन्धा र अज्ञानी हुन्! सुसमाचारका चार पुस्तकहरूलाई ध्यान दिएर पढ; येशूले गर्नुभएका कुराहरू र उहाँले बोल्‍नुभएका वचनहरूका बारेमा तिनमा के विवरण दिइएका छन् त्यसलाई पढ। हरेक पुस्तक अलिक फरक छ, र हरेकको आ-आफ्‍नै दृष्टिकोण छ। यदि यी पुस्तकहरूका लेखकहरूले लेखेका कुराहरू सबै पवित्र आत्‍माबाट आएका थिए भने, यो सबै उही र समरूप हुनुपर्ने थियो। त्यसो भए किन तिनमा भिन्‍नताहरू छन् त? के यसलाई देख्‍न नसक्‍ने गरी मानिस अत्यन्तै मूर्ख छैन र? यदि तँलाई परमेश्‍वरको गवाही दिन लगाइएको छ भने, तैँले कस्तो प्रकारको गवाही दिन सक्छस्? के परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने त्यस्तो तरिकाले उहाँको गवाही दिन सक्छ र? यदि अरूले तँलाई “यदि यूहन्‍ना र लूकाका विवरणहरूमा मानव इच्‍छा मिश्रित थिए भने, के तिमीहरूका परमेश्‍वरले बोलेका वचनहरूमा पनि मानव इच्‍छा मिश्रित छैनन् र?” भनी सोध्यो भने, के तँ स्पष्ट उत्तर दिन सक्छस्? लूका र मत्तीले येशूका वचनहरू सुनिसकेपछि, र येशूको काम देखिसकेपछि, तिनीहरूले येशूले गर्नुभएको कामका केही तथ्यहरूको विवरणलाई स्मरण गर्ने तरिकाले आफ्‍नै ज्ञान अनुसार बोले। के तँ तिनीहरूका ज्ञान पवित्र आत्माले नै पूर्ण रूपमा प्रकट गर्नुभएको थियो भनी भन्‍न सक्छस्? बाइबलभन्दा बाहिर, तिनीहरूका भन्दा उच्‍च ज्ञान भएका धेरै आत्मिक व्यक्तित्वहरू थिए, त्यसो भने किन तिनीहरूका वचनहरूलाई पछिका पुस्ताहरूले लिएनन्? के तिनीहरूलाई पनि पवित्र आत्‍माले प्रयोग गर्नुभएको थिएन र? यो जान कि, आजको काममा, मैले येशूको कामको जगमा आधारित मेरा आफ्‍नै अन्तर्दृष्टिहरू बोलिरहेको छैन, न त येशूको कामको पृष्ठभूमि विरुद्धमा मेरो आफ्‍नै ज्ञानको बारेमा नै बोलिरहेको छु। त्यो बेला येशूले के काम गर्नुभयो? अनि आज मैले के काम गरिरहेको छु? मैले जे गर्छु र भन्छु त्यसको पूर्वानुमान छैन। आज मैले हिँड्ने मार्गमा पहिले कहिल्यै हिँडिएको छैन, विगतका युगहरू र पुस्ताहरूका मानिसहरू कहिल्यै यसमा हिँडेका छैनन्। आज, यसको सुरुवात भएको छ, र के यो आत्माको काम होइन र? यो पवित्र आत्‍माको काम भए तापनि, विगतका अगुवाहरू सबैले आफ्‍नो कामलाई अरूका जगको आधारमा अघि बढाए; तैपनि, परमेश्‍वर स्वयमको काम भने फरक छ। येशूको कामको चरण पनि यस्तै थियो: उहाँले नयाँ मार्ग खोल्‍नुभयो। जब उहाँ आउनुभयो, उहाँले स्वर्गको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, र मानिसले पश्‍चात्ताप गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर भन्‍नुभयो। येशूले आफ्‍नो काम पूरा गर्नुभएपछि, पत्रुस र पावल अनि अरूले येशूको कार्यलाई अघि बढाउन सुरु गरे। येशूलाई क्रूसमा काँटी ठोकिएर स्वर्गमा उचालिएपछि, क्रूसको मार्ग फैलाउनको लागि तिनीहरूलाई आत्माले पठाउनुभएको थियो। पावलका वचनहरू उच्‍च रहेको भए तापनि, ती पनि येशूले जे भन्‍नुभएको थियो त्यसको जगमा आधारित थिए, जस्तै धैर्यता, प्रेम, कष्ट-भोग, शिर ढकाइ, बप्तिस्मा, वा पालन गर्नुपर्ने अरू धर्मसिद्धान्तहरू। यो सबै येशूको वचनहरूको जगको आधारमा बोलिएको थियो। तिनीहरूले नयाँ मार्ग खोल्‍न सक्दैन थिए, किनभने तिनीहरू सबै परमेश्‍वरले प्रयोग गर्नुभएका मानिसहरू थिए।
सुरुमा, जब येशूले आफ्‍नो सेवकाइलाई आधिकारिक रूपमा सुरु गर्न बाँकी नै थियो, उहाँलाई पछ्याउने चेलाहरूजस्तै उहाँ पनि कहिलेकहीँ मन्दिरका भेलाहरूमा जानुहुन्थ्यो, र भजनहरू गाउनुहुन्थ्यो, प्रशंसा चढाउनुहुन्थ्यो, र पुरानो करार पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँ बप्तिस्मा लिएर बाहिर निस्‍कनुभएपछि, आत्मा आधिकारिक रूपमै उहाँमाथि आउनुभयो र उहाँको पहिचान र उहाँले लिनुपर्ने सेवकाइलाई प्रकट गर्दै काम गर्न थाल्‍नुभयो। यसभन्दा पहिले, कसैले पनि उहाँको पहिचान जानेको थिएन, र मरियम बाहेक, यूहन्‍नालाई समेत थाहा थिएन। बप्तिस्मा लिनुहुँदा येशू २९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बप्तिस्मा पूरा भइसकेपछि, आकाश खोलिए, अनि एउटा आवाजले भन्यो: “यो मेरो प्रिय पुत्र हो, जसमा म अति प्रसन्न छु।” येशूले बप्तिस्मा लिनुभएपछि, पवित्र आत्माले यसरी उहाँको गवाही दिन थाल्‍नुभयो। २९ वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनुभन्दा पहिले, खाने बेलामा खाने, सामान्य रूपमै सुत्‍ने र वस्‍त्र लगाउने जस्ता कार्य गर्दै उहाँले सामान्य व्यक्तिको जीवन जिउनुभयो, अनि उहाँको बारेमा केही पनि अरूभन्दा फरक थिएन, यद्यपि यो मानिसको देहको नजरको लागि मात्रै थियो। बाइबलमा यसरी लेखिए झैँ, कहिलेकहीँ उहाँ पनि कमजोर बन्‍नुहुन्थ्यो, र कहिलेकहीँ उहाँले पनि काम-कुराहरूलाई पहिचान गर्न सक्‍नुहुन्‍नथियो: उहाँको बौद्धिकता उहाँको उमेरसँगै वृद्धि भयो। यी वचनहरूले उहाँसँग सामान्य र साधारण मानवता थियो, र उहाँ अरू साधारण मानिसहरूभन्दा विशेष रूपमा फरक हुनुहुन्‍नथियो भन्‍ने मात्रै देखाउँछ। उहाँ पनि सामान्य व्यक्ति जस्तै हुर्कनुभयो, र उहाँको बारेमा विशेष केही पनि थिएन। तैपनि, उहाँ परमेश्‍वरको हेरचाह र सुरक्षामा हुनुहुन्थ्यो। बप्तिस्मा लिएपछि, उहाँ परीक्षामा पर्न थाल्‍नुभयो, जसपछि उहाँले आफ्‍नो सेवकाइ गर्न र काम गर्न सुरु गर्नुभयो, अनि उहाँमा शक्ति, बुद्धि र अख्‍तियार थियो। यसो भन्‍नुको अर्थ उहाँको बप्तिस्माभन्दा पहिले पवित्र आत्‍माले उहाँमा काम गर्नुभएन, वा उहाँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्‍नथियो भन्‍ने होइन। उहाँको बप्तिस्माभन्दा पहिले पवित्र आत्मा पनि उहाँभित्र बास गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँले आधिकारिक रूपमा काम गर्न सुरु गर्नुभएको थिएन, किनभने परमेश्‍वरले कहिले आफ्‍नो काम गर्नुहुन्छ त्यसका सीमितताहरू हुन्छन्, यसको साथै, सामान्य मानिसहरूमा वृद्धि हुने सामान्य प्रक्रिया हुन्छ। पवित्र आत्‍माले सधैँ नै उहाँभित्र बास गर्नुभएको थियो: जब येशूको जन्‍म भयो, उहाँ अरूभन्दा फरक हुनुहुन्थ्यो, र बिहानीको तारा देखा पर्‍यो; उहाँको जन्‍मभन्दा पहिले, सपनामा योसेफकहाँ एक जना स्वर्गदूत देखा परे र मरियमले एक बालक जन्‍माउनेछिन्, र उक्त बालक पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएको हो भनी तिनलाई भने। येशूको बप्तिस्मा भएपछि, पवित्र आत्माले आफ्‍नो काम सुरु गर्नुभयो, तर यसको अर्थ पवित्र आत्मा भर्खरै येशूमा ओर्लनुभएको थियो भन्‍ने हुँदैन। पवित्र आत्मा ढुकुरजस्तै उहाँमा ओर्लनुभयो भन्‍नुले उहाँको सेवकाइको आधिकारिक सुरुवातलाई जनाउँछ। परमेश्‍वरका आत्मा पहिले नै उहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यस बेलासम्‍म काम गर्न सुरु गर्नुभएको थिएन, किनभने समय आइसकेको थिएन, र आत्माले हतारमा काम सुरु गर्नुभएन। आत्माले बप्तिस्माद्वारा उहाँको गवाही दिनुभयो। जब उहाँ पानीबाट माथि उठ्नुभयो, तब आत्माले आधिकारिक रूपमा नै उहाँमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो, जसले परमेश्‍वरको देहधारी शरीरले आफ्‍नो सेवकाइलाई पूरा गर्न थाल्‍नुभएको थियो र छुटकाराको काम सुरु गर्नुभएको थियो, अर्थात् अनुग्रहको युग आधिकारिक रूपमा सुरु भएको थियो भन्‍ने अर्थ दिन्छ। त्यसकारण, उहाँले जुनसुकै काम गर्नुभए तापनि परमेश्‍वरको कार्यको समय हुन्छ। उहाँको बप्तिस्मापछि, येशूमा कुनै निश्‍चित परिवर्तनहरू आएको थिएन; उहाँ अझै पनि उहाँको मूल देहमा नै हुनुहुन्थ्यो। के मात्रै थियो भने उहाँले आफ्‍नो काम सुरु गर्नुभयो र आफ्‍नो पहिचान प्रकट गर्नुभयो, र उहाँ अख्‍तियार र शक्तिले भरिपूर्ण हुनुभयो। यस हिसाबमा उहाँ पहिलेभन्दा फरक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पहिचान फरक थियो, भन्‍नुको अर्थ, उहाँको हैसियतमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको थियो; यो पवित्र आत्माको गवाही थियो, मानिसले गरेको काम होइन। सुरुमा, मानिसहरूलाई थाहा थिएन, र त्यसरी पवित्र आत्‍माले येशूको गवाही दिनुभएपछि मात्रै तिनीहरूले थोरै जान्न पुगे। यदि पवित्र आत्‍माले उहाँको गवाही दिनुभन्दा पहिले येशूले ठूलो काम गर्नुभएको थियो, तर यो परमेश्‍वर स्वयमको गवाही विनाको थियो भने, उहाँको काम जति नै ठूलो भए तापनि, मानिसहरूले कहिल्यै पनि उहाँको पहिचानलाई जान्‍ने थिएनन्, किनभने मानव आँखाले यसलाई देख्‍न सक्दैन। पवित्र आत्माको गवाहीको चरणविना, उहाँलाई कसैले पनि देहधारी परमेश्‍वरको रूपमा पहिचान गर्नेथिएन। यदि पवित्र आत्माले उहाँको गवाही दिएपछि, येशूले कुनै पनि भिन्‍नताविना उही तरिकाले निरन्तर काम गर्नुभएको भए, यसको त्यति प्रभाव हुनेथिएन, र यही कारणले नै पवित्र आत्माको कार्यलाई पनि प्रदर्शन गरिन्छ। पवित्र आत्माले गवाही दिनुभएपछि, पवित्र आत्माले आफैलाई देखाउनु परेको थियो ताकि तैँले उहाँ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, उहाँभित्र परमेश्‍वरका आत्मा हुनुहुन्थ्यो भन्‍ने कुरालाई स्पष्ट देख्‍न सक्; परमेश्‍वरको गवाही गलत थिएन, र उहाँको गवाही सहि थियो भन्‍ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्न सक्यो। यदि पवित्र आत्माको गवाहीभन्दा पहिलेको काम र पछिको काम उही रहेको थियो भने, उहाँको देहधारी सेवकाइ र पवित्र आत्‍माको कार्य स्पष्ट हुनेथिएन, तसर्थ मानिसले पवित्र आत्‍माको कार्यलाई पहिचान गर्नेथिएन, किनभने तिनमा कुनै स्पष्ट भिन्‍नता हुनेथिएन। गवाही दिइसक्‍नुभएपछि, पवित्र आत्माले यो गवाहीलाई कायम राख्नु पर्नेथियो, त्यसकारण उहाँले येशूमा उहाँको बुद्धि र अख्‍तियार प्रकट गर्नु पर्नेथियो, जुन विगतको भन्दा फरक थियो। अवश्य नै, यो बप्तिस्माको प्रभाव थिएन—बप्तिस्मा एउटा विधि मात्रै हो—बप्तिस्मा भनेको अब उहाँको सेवकाइ गर्ने समय आएको छ भन्‍ने देखाउने एउटा तरिका मात्रै थियो। त्यस्तो कार्य परमेश्‍वरको महान् शक्तिलाई स्पष्ट पार्न, पवित्र आत्माको गवाहीलाई स्पष्ट पार्नको लागि मात्रै थियो, र पवित्र आत्‍माले यो गवाहीको लागि अन्त्यसम्‍मै जिम्‍मेवारी लिनुहुनेथियो। आफ्‍नो सेवकाइ गर्नुभन्दा पहिले, येशूले पनि प्रवचनहरू सुन्‍नुभयो, विभिन्‍न स्थानमा सुसमाचार प्रचार गर्ने र फैलाउने काम गर्नुभयो। उहाँले कुनै ठूलो काम गर्नुभएन किनभने उहाँको सेवकाइ गर्ने बेला आइसकेको थिएन, किनभने परमेश्‍वर स्वयम्‌ नै नम्र भई देहमा लुक्‍नुभएको थियो, र उहाँले समय तयार नभइञ्‍जेलसम्‍म कुनै काम गर्नुभएन। उहाँले दुई कारणले गर्दा बप्तिस्माभन्दा पहिले काम गर्नुभएन: पहिलो, काम गर्नको लागि पवित्र आत्मा आधिकारिक रूपमा उहाँमा ओर्लनुभएको थिएन (भन्‍नुको अर्थ, त्यस्तो काम गर्नको लागि पवित्र आत्माले येशूलाई शक्ति र अख्‍तियार दिनुभएको थिएन), र उहाँले आफ्‍नै पहिचान जान्‍नुभएको भए तापनि, उहाँले पछि गर्ने अभिप्राय राख्‍नुभएको काम गर्न येशूले सक्‍नुहुन्‍नथियो, र उहाँले आफ्‍नो बप्तिस्माको दिनसम्‍म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेथियो। यो परमेश्‍वरको समय थियो, र यसलाई कसैले पनि उल्‍लङ्घन गर्न सक्दैनथियो, चाहे यो येशू स्वयम् नै किन नहोस्; येशू स्वयम्‌ले आफ्‍नो काममा बाधा दिन सक्‍नुहुन्‍नथियो। अवश्‍य नै, यो परमेश्‍वरको नम्रता थियो, र परमेश्‍वरको कार्यको नियम पनि थियो; यदि परमेश्‍वरका आत्माले काम नगर्नुभएको भए, कसैले पनि उहाँको काम गर्न सक्दैनथियो। दोस्रो, उहाँलाई बप्तिस्मा दिइनुभन्दा पहिले, उहाँ अत्यन्तै सामान्य र साधारण मानिस हुनुहुन्थ्यो, र अरू सामान्य र सर्वसाधारण मानिसहरूभन्दा फरक हुनुहुन्‍नथियो; देहधारी परमेश्‍वर किन अलौकिक हुनुहुन्‍नथियो त्यसको एउटा पक्ष यही नै हो। देहधारी परमेश्‍वरले परमेश्‍वरका आत्माका बन्दोबस्तहरूलाई अवहेलना गर्नुभएन; उहाँले सुव्यवस्थित तरिकाले काम गर्नुभयो र उहाँले अत्यन्तै सामान्य रूपमा काम गर्नुभयो। बप्तिस्मापछि मात्रै उहाँको काममा अख्‍तियार र शक्ति भयो। भन्‍नुको अर्थ, उहाँ देहधारी परमेश्‍वर हुनुभए तापनि, उहाँले कुनै पनि अलौकिक कार्यहरू गर्नुभएन, र उहाँ अरू सामान्य मानिसहरू जस्तै उही तरिकामा हुर्कनुभयो। यदि येशूले पहिले नै उहाँको आफ्‍नो पहिचानलाई जान्‍नुभएको थियो, उहाँको बप्तिस्माभन्दा पहिले नै देशभरि सबै ठाउँमा ठूलो काम गर्नुभएको थियो, र आफैलाई असाधारण रूपमा प्रदर्शन गर्दै, उहाँ सामान्य मानिसहरूभन्दा फरक हुनुभएको थियो भने, यूहन्‍नाले आफ्‍नो काम गर्नु असम्‍भव मात्रै हुनेथिएन, तर परमेश्‍वरले आफ्‍नो कामको अर्को चरण सुरु गर्ने पनि कुनै उपाय हुनेथिएन। त्यसकारण परमेश्‍वरले जे गर्नुभएको थियो त्यो गलत थियो भन्‍ने यसले प्रमाणित गर्नेथियो, र मानिसको लागि, परमेश्‍वरका आत्मा र परमेश्‍वरको देहधारी शरीर एउटै स्रोतबाट आउनुभएको होइन भन्‍ने जस्तो देखिनेथियो। त्यसकारण बाइबलमा विवरण दिइएको येशूको कार्य उहाँको बप्तिस्मापछि गरिएको कार्य थियो, जुन तीन वर्षको अवधिमा गरिएको कार्य थियो। उहाँको बप्तिस्मा हुनुभन्दा पहिले उहाँले के गर्नुभयो त्यसको बारेमा बाइबलले विवरण दिँदैन किनभने उहाँले बप्तिस्मा लिनुभन्दा पहिले यो काम गर्नुभएन। उहाँ एक साधारण मानिस मात्रै हुनुहुन्थ्यो र सामान्य मानिसको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो; येशूले आफ्‍नो सेवकाइ गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले, उहाँ सामान्य मानिसहरूभन्दा फरक हुनुहुन्‍नथियो, र अरूले उहाँमा कुनै भिन्‍नता देख्‍न सक्दैनथिए। उहाँ २९ वर्ष पुग्‍नुभएपछि मात्रै उहाँ परमेश्‍वरको कार्यको एउटा चरण पूरा गर्न आउनुभएको हो भन्‍ने येशूलाई थाहा भयो; त्योभन्दा पहिले, उहाँ स्वयमलाई यो थाहा थिएन, किनभने परमेश्‍वरले गर्नुभएको कार्य अलौकिक थिएन। जब बाह्र वर्षको उमेरमा उहाँ सभाघरको भेलामा सहभागी हुनुभयो, मरियमले उहाँको खोजी गरिरहेकी थिइन्, र उहाँले अरू कुनै पनि बच्‍चाकै शैलीमा जस्तै गरि एउटा वाक्य भन्‍नुभयो: “आमा! मैले मेरो पिताको इच्‍छालाई नै सबैभन्दा माथि राख्‍नुपर्छ भन्‍ने तपाईंलाई थाहा छैन?” अवश्य नै, उहाँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भई जन्‍मनुभएको हुनाले, के येशू कुनै न कुनै तरिकाले विशेष हुन सक्‍नुहुन्‍नथियो र? तर उहाँको विशेषपनले उहाँ अलौकिक हुनुहुन्थ्यो भन्‍ने अर्थ दिँदैन, तर अरू कुनै पनि साना बालकले भन्दा बढी उहाँले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। स्वरूपमा उहाँ मानव हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँको सार अझै विशेष, र अरूको भन्दा फरक थियो। तैपनि बप्तिस्मापछि मात्रै, पवित्र आत्‍माले उहाँमा काम गरिरहनुभएको छ भन्‍ने कुरालाई उहाँले वास्तवमै अनुभूति गर्न सक्‍नुभयो, उहाँ परमेश्‍वर स्वयम्‌ नै हुनुहुन्छ भन्‍ने अनुभूति गर्नुभयो। उहाँ ३३ वर्षको उमेरमा पुग्‍नुभएपछि मात्रै पवित्र आत्‍माले उहाँद्वारा क्रूसीकरणको काम गर्ने अभिप्राय राख्‍नुभएको छ भन्‍ने उहाँले साँचो रूपमा पहिचान गर्नुभयो। ३२ वर्षको उमेरमा, उहाँले मत्तीको सुसमाचारमा लेखिएजस्तै, केही भित्री सत्यताहरूलाई जान्‍नुभएको थियो: “अनि सिमोन पत्रुसले जवाफ दिएर भने, तपाईं जीवित परमेश्‍वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। … त्यस समयदेखि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ कसरी यरूशलेम जानुपर्छ र धर्मगुरु, मुख्य पुजारी र व्यवस्थाका पण्डितहरूबाट धेरै किसिमका कष्ट भोग्‍नुपर्छ र मारिनुपर्छ अनि तेस्रो दिनमा फेरि उठाइनुपर्छ भन्‍ने कुरा देखाउन थाल्‍नुभयो।” उहाँले के काम गर्नुपर्छ भन्‍ने कुरा उहाँलाई पहिले थाहा भएन, तर निश्‍चित समयमा मात्रै थाहा भयो। उहाँ जन्‍मने बित्तिकै उहाँलाई पूर्ण रूपमा थाहा भएन; पवित्र आत्‍माले उहाँमा क्रमिक रूपमा काम गर्नुभयो, र त्यहाँ कामको प्रक्रिया थियो। यदि, सुरुमा नै, उहाँ परमेश्‍वर, र ख्रीष्‍ट, अनि मानिसको देहधारी पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँले क्रूसीकरणको काम पूरा गर्नुपर्छ भन्‍ने उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो भने, उहाँले किन पहिले काम गर्नुभएन? आफ्‍ना चेलाहरूलाई आफ्‍नो सेवकाइको बारेमा बताइसक्‍नुभएपछि मात्रै किन येशूले शोकको अनुभूति गर्नुभयो, र यसको लागि उत्कटताको साथ प्रार्थना गर्नुभयो? पहिले उहाँले नबुझ्‍नुभएका धेरै कुराहरूलाई उहाँले बुझ्‍नुभन्दा पहिले किन यूहन्‍नाले उहाँको लागि बाटो खोलिदियो र उहाँलाई बप्तिस्मा दियो? यसले के प्रमाणित गर्छ भने, यो देहधारी परमेश्‍वरले देहमा गर्नुहुने काम थियो, त्यसकारण उहाँले बुझ्‍ने र हासिल गर्ने एउटा प्रक्रिया थियो, किनभने उहाँ परमेश्‍वरको देहधारी शरीर हुनुहुन्थ्यो, जसको काम आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुभएको कामभन्दा फरक थियो।
तैँले येशू आखिरी दिनहरूको अवधिमा ओर्लनुहुनेछ भन्‍ने मात्रै जान्दछस्, तर उहाँ खास कसरी ओर्लनुहुनेछ? भर्खरै छुटकारा पाएको, र परमेश्‍वरद्वारा परिवर्तन भई नसकेको, वा सिद्ध भई नसकेको तिमीहरूजस्तो पापी, के तँ परमेश्‍वरको हृदय अनुसारको बन्‍न सक्छस्? अझै पनि तेरो पुरानो मनुष्यतामा रहेको तेरो विषयमा भन्दा, तँलाई येशूले मुक्ति दिनुभएको थियो, र परमेश्‍वरले दिनुभएको मुक्तिको कारण तँलाई पापीको रूपमा गन्ती गरिँदैन भन्‍ने कुरा साँचो हो, तर तँ पापी छैनस्, र तँ अशुद्ध छैनस् भन्‍ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्दैन। तँ परिवर्तन भएको छैनस् भने तँ कसरी सन्तमय बन्‍न सक्छस्? भित्री रूपमा, तँ अपवित्रता, स्वार्थ र छुद्रले भरिएको छस्, तैपनि तँ अझै येशूसँग अवरोहण गर्न चाहन्छस्—तँ धेरै भाग्यमानी हुनुपर्छ! परमेश्‍वरमाथिको भरोसामा तैँले एउटा कदमलाई चुकाएको छस्: तँलाई छुटकारा मात्रै दिइएको छ, तर तँ परिवर्तन भएको छैनस्। तँ परमेश्‍वरको हृदय अनुसारको बन्‍नको लागि, परमेश्‍वरले तँलाई व्यक्तिगत रूपमै परिवर्तन गर्ने र धुने काम गर्नुपर्छ; यदि तँलाई छुटकारा मात्रै दिइएको हो भने, तैँले पवित्रता प्राप्त गर्न सक्‍नेछैनस्। यसरी तँ परमेश्‍वरको कार्यको असल आशिषहरूमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछस्, किनभने मानिसलाई व्यवस्थापन गर्ने परमेश्‍वरको कार्यको चरणलाई तैँले चुकाएको छस्, जुन परिवर्तन हुने र सिद्ध पारिने कार्यको मुख्य चरण हो। भर्खरै छुटकारा दिइएको पापी, तैँले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्‍वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनस्।